Kraoma – Tsaratanana: voasambotra ireo mpianaka atidohan’ilay fakana an-keriny | NewsMada
Kraoma – Tsaratanana: voasambotra ireo mpianaka atidohan’ilay fakana an-keriny
Par Taratra sur 13/11/2018
Tratra ny olona efatra, vehivavy roa sy mpianaka, voalaza fa anisan’ny tompon’antoka amin’ny fakana an-keriny tany Kraoma Tsaratanàna. Mbola misy ihany anefa ny karohina manodidina izany…
Nitohy hatrany ny fanadihadiana manodidina ny fakana an-keriny tany amin’ny Kraoma, distrikan’i Tsaratanàna, faritra Betsiboka, na efa nisy aza ny olona maromaro sarona tamin’izany. Voasambotra, ny faran’ny herinandro teo, ny mpianaka izay atidoha nikotrika ny fakana an-keriny ireo mpiasan’ny Kraoma na Kraomita malagasy, ny volana jolay lasa teo. Noho ny ezaka nataon’ny zandarimaria sy ny angom-baovao nataon’izy ireo no nahafantarana fa fianakaviana iray ihany ny atidoha tamin’ny fakana an-keriny ireo mpiasa ireo sy ireo vehivavy roa hafa nalaina an-keriny.
Nahazoan’ireo mpaka an-keriny vola mitentina 10 tapitrisa Ar izany. Mbola nisy vehivavy roa hafa ihany koa voasambotra, voalaza fa anisan’ny atidoha amin’ny fakana an-keriny. Havan’ireo mpianaka tratra ihany ireto.
Tsiahivana fa olona efatra mpisan’ny kraomita ireo nisy naka an-keriny ireo. Nitaky vola 100 tapitrisa Ar ireo mpaka an-keriny. Nanao ny fikarohana ny mpitandro filaminana ka tratra tamin’izany ny olona maromaro, efa notanana am-ponja. Misy anarana mandeha ihany koa antsoina hoe Del Kely. Ity farany izay anisan’ny atidoha miketrika sy mitarika ireo mpaka an-keriny ary mbola tsy hita ny misy azy io hatramin’izao. Ireo vehivavy roa sy ireo mpianaka no tratra nanampy ireo efa tratra tany aloha. Hatolotra ny fampanoavana tsy ho ela izy ireo.
Karana tsy mbola hita
Tsy mbola hita kosa ilay Karana nisy naka an-keriny, ny faran’ny herinandro teo, teny Ambatobe Panoramique. Tompon’ny Maki Plast sady mpandraharaha amin’ny zavatra maro eto amintsika ity Karana ity. Tsy nisy ny vaovao tonga teny amin’ny mpitandro filaminana. Mazana, mijanona eo amin’ny Karana sy ireo jiolahy ihany ny resaka. Indraindray aza ny mpitandro filaminana milaza fa efa mivoaka ny vaovao vao mahalala ny fisian’ny fakana an-keriny. Somary taraiky rahateo ny vaovao azon’ny mpitandro filaminana sy ny fanadihadiana mifanaraka amin’izany.